#democracyformyanmar #saveMyanmar... - Wutt Hmone Shwe Yi - Download Facebook Videos
#democracyformyanmar #saveMyanmar... - Wutt Hmone Shwe Yi
Wutt Hmone Shwe Yi 181.4K Views
Khin Hnin Su 10 months ago
အၾကမ္းနည္းနဲ႔ မဟုတ္ပဲ ေမတၱာနည္းသုံးရမွာ
ဝင္လာတဲ့မိန္းမေတြကို ေနတိုး၊ ေျပတီဦးတို့ကအလုပ္မဆင္းနဲ႔ေနာ္ လာ လာ မုန္႔သြားစားရေအာင္လို့ေခၚ...
ပိုင္တံခြန္တို့ မင္းေမာ္ကြန္းတို့ Tyron ခါရာတို့ေတြေရာ လာသမၽွ အန္တီေတြကိုဆြဲေခၚ... စည္း႐ုံး အဲ့လိုလုပ္ရမွာ သိလား
အဲ့တာ ဆို သူတို့ ဘယ္လိုေနေန ႐ုံး မတတ္ေတာ့မွာ ေသခ်ာ ပါတယ္
ကစ်ကိုကိုချမ်း ကစ်ကိုကိုချမ်း6months ago
Wutt Hmone Shwe Yi အေးစက်​နေတဲ့ ငါ့ရင်ဘတ်ထဲကို မင်း အလင်းတွေ ပက်ဖျန်းပြီး သက်တန့်တစ်ခု လို ဖြစ်စေခဲ့တာ ကျေးဇူးတင်တယ်။ အပေါစား အချစ်တွေ နားခို ဖူးတဲ့ ငါ့နှလုံးသား ဧည့်ခန်းထဲ။ မင်းရောက်လာတော့ ခမ်းနားသွားတာ ကျေးဇူးတင်တယ်။ ငါ့အနာဂါတ် ငါ့ကမ္ဘာထဲ။ ရွှေရောင်တွေတောင် မင်းလောက် မခမ်းနားတယ်။ ဒါဏ်ရာတွေကို မင်းကုလိုက်တယ်။ မင်းလောက်ငါ့အပေါ်ကောင်းတာ မရှိနိုင်ပါ။ မင်းရဲ့ နားလည်မှု။ ခွင့်လွတ်ခြင်းတွေ။ သိတတ်ခြင်းတွေ။ ငါယုံကြည်ပါပြီ အခု။ မင်းစေတနာ ကိုနားလည်ခဲ့ချိန်ငါ။ နောက်ထပ် မဆိုးတော့ဘူး။ ပြောင်းလဲလိုက်ပြီ။ စိတ်မပျက်လိုက်ပါနဲ့။ နေခြည်ရေ။ ထွက်မသွားနဲ့။ ထွက်မသွားနဲ့ အဝေး။
Aung Thura Kyaw 10 months ago
Myanmar Military Dictator is doing same things as he did in 1988.On the morning of 12 February 2021,he released prisoners to create destabilizations in country.The prisoners did violence and burned to peaceful people’s homes. This is the military dictator's cunning ploy to blame the protesters. Twitter မှာ Followers များတဲ့သူများတင်ပေးကြပါ
Wilson Sid 10 months ago
Copy ကူးပါ မ share ပါနှင့်!!!
MPT ( ABC Telecomm မှ Yangon Regional Manager) "ဦးပြုံးဟန်ထူး" သည် CDM တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသော ဝန်ထမ်းများအား ​တော်လှန်​​ရေးလုပ်ချင်ရင် တသက်လုံး​တော်လှန်​ရေးပဲလုပ် အလုပ်ကိုမလာနှင့်ဟု အမျိုးမျိုး ခြိမ်း​ခြောက်ဖိအားပေးခြင်းများပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။
Yangon Regional Manager ဦးပြုံးဟန်ထူးအား ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ social shaming လုပ်ပါသည်။
Shame on you U Pyone Han Htoo
Arkar Min Htet 10 months ago
ပထမရက်တုန်းက သပိတ်မှောက်သူ 15 သိန်းနီးပါးရှိတယ်တဲ့ ဒီနေ့ သောင်းကျော်ပဲကျန်တော့တယ် !!!
ညတွေမှာ သံပုံးသံတွေ နားထဲ သိပ်ကျယ်မနေတော့ဘူး
ဘာလို့လဲ ခင်ဗျားတို့ အားလျော့နေကြပြီလား ?
သူတို့အကြမ်းဖက် မဖြိုခွဲဘူးဆိုတာက နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်နေတာက တကြောင်း၊
သူ အင်အားသုံးလိုက်လို့ ပြည်သူတွေအုံကြွလာပြီး သူတို့မျှော်မှန်းထားတာထက် ပိုကြာသွားမှာစိုးရိမ်တာက တကြောင်း၊ အဲ့တာတွေကြောင့် ငြိမ်နေတာ
အကောင်းထင်မနေကြနဲ့ ခင်ဗျားတို့ အားလျော့သွားမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေကြတာ
အဲ့တော့ လုံးဝ အားလျော့မသွားကြပါနဲ့ ပိုတင်းထားပါ
ဒီတခါ ရှုံးရင် တနိုင်ငံလုံးရး မြောင်းထဲရောက်မှာမို့
Nang Kaythari Kyaw 10 months ago
ဘာသတင်း post မှတတ်မလာတော့ဘူး ။❌❌
လမ်းကြောင်းတွေ လွဲနေကြပီ ‼️
နေ့စားတွေ ဖမ်းပီး ဖျောက်ခံနေရတာ ငါတို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးနော် အစတည်းက ငွေမက်ပီး မစဉ်းစားဘဲ လုပ်ကြတာ နည်းနည်းသနားပေမယ့် ဒီ post ချည်းပဲ တောက်လျှောက်တက်နေတယ်
နောက်တခု GenZ ရဲ့ Project Z ကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပွနေပီ လူသိမခံစေချင်လို့ ထပ်မတင်ကြပါနဲ့တော့ ‼️
အခု ငါတို့ လုပ်ရမှာ ‼️‼️
CDM CDM /
ပီးရင် မြင်သာထင်သာရှိတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ Bannerတွေနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ /
နောက်တခု Twitter မှာ tweet ဖို့
အရေးကြီးဆုံးက ငါတို့ အပေါ်ကpost တွေ တင်နေတုန်း တချိူ့လူတွေ ဖမ်းခံနေရပီ
ဘယ်နေရာ ဘယ်လို ထောင်ခါခါ ဘယ် ဒလံပေါ်ပေါ် ငါတို့ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်
862350944560371-Wutt Hmone Shwe Yi
Wutt Hmone Shwe Yi 209K views ·